Skype nweziri ike ịtụgharị mkparịta ụka gị n'otu oge ka ọ bụrụ asụsụ itoolu | Akụkọ akụrụngwa
Skype bụ otu n'ime kpakpando ọrụ nke Microsoft Na n'ihi nke a, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị mmepe na-arụ ọrụ nke mere na ndị ọrụ niile na-aga n'ihu na-ahụ ikpo okwu ahụ dị ka ntụnye aka n'ahịa karịa ọtụtụ ndị ọzọ na, na-anwa idetuo ma dọta ndị ọrụ, amalitelarị ịnye ọrụ ndị yiri ya. .
N'etiti ozi ọma Microsoft kwupụtara na nso nso a banyere usoro ikpo okwu, ekwesịrị ịdeba ama na ndị ọrụ niile bụ akụkụ nke mmemme ahụ Onye ndu Windows na-enweta mmelite ọhụrụ site na Skype ebe a ga-ahapụ ha ka ha jiri Skype Ntụgharị na oku na mobiles na landlines.
Onye nsụgharị Skype na-enye gị ohere ịsụgharị oku gị na ekwentị na ekwentị gaa n'asụsụ itoolu dị iche iche.
Dabere na nkwupụta mgbasa ozi ezitere, Skype Onye ntụgharị nwere ike ịrụ ọrụ na ya asụsụ itoolu, English, Spanish, French, German, Mandarin Chinese, Italian, Brazil Portuguese, Arabic na Russian. Ihu ọma, mgbe ị na-akpọ onye ọ bụla, ị ga-ahọrọ asụsụ tupu ị kpọọ oku. Mgbe onye natara otu ihe ahụ ga - apụ, ọ ga - anụ ozi na - egosi na a ga - edekọ mkparịta ụka ma sụgharịa ya site na iji ọrụ a.
Dịka nkọwa ikpeazụ, chetara gị na mmemme Windows Insider Microsoft na-enye ndị ọrụ niile chọrọ idebanye aha na ya, onye ọ bụla nwere ike isonye na mmemme a, iji nwalee ụdị mbido nke ngwaahịa sọftụwia nke ụlọ ọrụ ahụ tupu ha erute ndị ọrụ niile. Ọ bụrụ na ị bụbu onye otu mmemme ma chọọ ịnwale ọrụ ọhụrụ nke Skype, gwa gị na ị ga-emerịrịrịrị na ị nwere kacha ọhụrụ nke Skype Preview arụnyere nakwa na ị nwere otuto ma ọ bụ ndenye aha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Skype nweziri ike ịtụgharị mkparịta ụka gị n'otu asụsụ gaa n'otu oge